MAXAY TAHAY MAALIN LUNTAY | Toggaherer's Blog
« Talo ku socota Engineer Xuseen Maxamuud Jiciir amaba Dawladda Hoose ee Hargaysa
DOODA FURAN: MIISAANKA MAANSADA EE GAARRIYE IYO MIISAANKA MAANSADA EE CARAALE MIDKEE TAYO BADAN? »
MAXAY TAHAY MAALIN LUNTAY
Waa maalin kaa tagtay oo aan kuu soo noqonaynin. Maalin kasta oo kaa tagtaana waxa ay kugu dhowysaa albaabka qabriga. Malakulmowdkuna maalin kasta waxa uu ina soo eegaa shan jeer. Malakulmawdkuna siduu inoogu waramay Xabiibkii Mustafa, waxa uu si fiican u garanayaa in ka qofka dhalashadiisa
Waxaan idiin sheegiyaa in uu malakulmowdku la saxiib ahaa Nebi Sulaymaan Ibnu Daa’uud. Wuxuu ahaa malakulmowdku mid isku eekaysiiya suurad bashar oo aad u qorox badan.
Maalin Maalmaha ka mida ayuu malakulmowdkii soo booqday Nebi Sulaymaan. Maalintaasina waxa la fadhiyay mid ka mid ah Wasiirkiisii. Markuu malagii dhamaystay booqashadiisii oo uu sii maca-salaameeyay Nebi Sulaymaan ayuu malagii wasiirkii si xun oo u soo eegay ka dibna wuu iska tagay.
Markuu malagii tagay ayuu wasiirkii ku yidhi Sulaymaan kumuu ahaa kii kula fadhiyay ee kaa tagay? Neabi Allow?! Sulaymaan baa ugu jawaabay oo
yidhi, “Maxaad ii waydiinaysaa su’aashaasi wasiiryohow?! Wasiirkii baa ugu celiyay, “maxaa yeelay waxaan ku arkay aragti yaab leh oo cajiiba. Sulaymaan baa yidhi, Wuxuu ahaa malakulmowdkii ama malagii nafta qaadayay.
Wasiirkii waa uu wareeray waanu isku dhex yaacay wuxuuna yidhi, “oo muxuu sidaasi iigu eegayay Nabi Allow?! Ilaahaybaan kugu dhaarshee dabayshaada amar si ay ii gayso Bilaadul Hindi. Waayo anigu ma awoodu inaan sii joogo meel aan ku arkay malakulmowdkii! Nebi Sulaymaaan baa ku yidhi wasiirkii, Oo miyuu kaa hor istaagayaa safarkani haduu yahay mid xagga Illaahay laga xaliyay.
Wasiirkii baa yidhi, “Waxaan kaa baryayaa inaad dabayshaada aad amartid si ay iigu qaado meel fog oo ka mida Bilaadul Hindi. Sulaymaan wuxuu amray dabayshii wasiirkiina waxa uu raacay dabayshii. Intuuna wasiirkii gaadhin meeshii ayuu malakulmowdkii u yimi Sulaymaan, waxanu ku yidhi, “Suleymaanow kan wuxuu Illaahay igu amray inaan naftiisa kaga qaado Bilaadul Hindi Lakiin se markaan ku arkay halkan waan yaabay waxaanaan Illlaahay ku idhi, “Raabiyow ninkan waxaad igu amartay inaan naftiisa aan ku qabto Bilaadul Hindi ee maxaa keenay majliska Sulayaan Mgaalda Quddus iyo halkan.
Markii uu gaadhay wakhtigiisii ee uu wasiirkii tagay Hindiya ayuu malagii la kulmay si uu malagii u oofiyo awaamiirta rabi naf kastana waxa ay dhadhaminaysaa geerida. Nafna ma garanayso waxay berri kasbanayso nafna ma garanayso dhulkay ku dhimanayso. Illaahay baa arintaas og oo u khabiira.
Hadaba waxaan idiinku soo gabagabaynayaa in aynu wakhtigeena aynu ka faa’iidaysno xagga rabina aynu u noqono, shaydaankana aynu la dagaalano. Waayo shaydaanku wuxuu inoo yahay cadow cad.
hadii aad tahay mid
intuuna mowdku ku haleelin
This entry was posted on June 16, 2009 at 6:01 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.